Maamulka Koonfur Galbeed oo taageeray Isbaheysiga Sacuudiga iyo Imaaraatka Carabta[Akhriso] | SAHAN ONLINE
Maamulka Koonfur Galbeed oo taageeray Isbaheysiga Sacuudiga iyo Imaaraatka Carabta[Akhriso]
BAYDHABO – Maamulka Koonfur galbeed ayaa taageeray Isbaheysiga uu hoggaamiyo Sacuudiga iyo Imaaraatka carabta ,waxayna sheegeen in go’aankii dowladda Federaalku ka qaadatay xiisada Khaliijka in aan la tixgelin.
Warsaxaafadeed ku qornaa afka English-ka oo kasoo baxay Xafiiska Madaxweynaha Koonfur galbeed Shariif Xasan Aadan ayaa lagu sheegay in maamulka Koonfur galbeed uu garab taagan yahay Isbaheysiga Sacuudiga iyo Imaaraatka Carabta.
Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Sacuudiga iyo Imaaraatku ka dhaxeeyo Soomaaliya xiriir Iskaashi oo taariikh leh.
Sidoo kale ,waxaa lagu sheegay Warsaxaafadeedka in Imaaraatka uu Soomaaliya ka taageero dhinacyada bini’aadanimada,caafimaadka iyo gargaarka degdega ah,dadka ku dhaqan dhammaan gobolada dalka oo dhan.
Warsaxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Shirkii hoggaamiyaasha qaran ee bishii July ay ku caddeeyeen mowqifkooda isla markaana aan dhexdhexaad laga noqon karin xiisada Khaliijka.
Go’aanka dowladda Federaalka ka qaadatay xiisada Khaliijka bishii June 2017 wuxuu ahaa mid aan laga tixgelin lagana tashan dhamaan dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo shacabkooda ee ay saameynta ku yeelaneyso”ayaa lagu yiri War saxaafadeedka.
Waxaana Warsaxaafadeedka lagu yiri in dowladda Federaalka ka codsadeen inay dib u eegis ku sameyso go’aanka ay ka qaadatay Khilaafka Khaliijka.
Hoos ka akhriso Warsaxaafadeedka